Chinja Outlook 2003 Unicode PST Faira kuva Yekare ANSI Fomati - Nhanho-nhanho Nongedzo
musha Products DataNumen Outlook Repair Chinja Outlook 2003-2010 Unicode PST Faira kuva Yekare ANSI Fomati
Chinja Outlook 2003-2010 Unicode PST Faira kuva Yekare ANSI Fomati
Ongorora: Iwe unofanirwa kuve neAptlook yakaiswa kuti ushandise iri gwaro.
Kubva Outlook 2003, itsva PST faira fomati inounzwa iyo ine zvakawanda zvakawanda zvakanakira kupfuura yekare. Iyo fomati nyowani inonzi zvakare Unicode fomati kazhinji, nepo iyo yekare fomati iyo inonzi ANSI fomati zvinoenderana. Mazita ese ari maviri anoshandiswa mukati megwara rino.
Kunyangwe fomati nyowani iri nani zvakanyanya kupfuura yekare, dzimwe nguva (mostly yezvikonzero zvekuenderana) iwe uchiri kuda kushandura iyo PST faira mune nyowani Unicode fomati ive yekare ANSI fomati. Semuenzaniso, iwe unoda kuendesa iyo PST data kubva pakombuta ine Outlook 2003-2010 kune imwe ine chete Outlook 97-2002 yakaiswa.
Microsoft haina kugadzira chinoshandiswa chinogona kuita shanduko yakadaro. Asi usazvidya moyo. DataNumen Outlook Repair inogona kukubatsira mune iyi nyaya.
Cherechedza: Usati washandura nyowani Unicode PST faira ine DataNumen Outlook Repair, ndapota vhara Microsoft Outlook uye chero mamwe maapplication anogona kuchinja iyo PST faira.
Sarudza iyo nyowani Unicode PST faira sosi PST faira kuti igadziriswe:
Sezvo iyo PST faira iri mune iyo nyowani Outlook 2003-2010 fomati, ndokumbira utaure yayo faira fomati ku "Outlook 2003-2010" mubhokisi re combo padivi peinobva faira hodhi bhokisi. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Kutsunga", ipapo DataNumen Outlook Repair ichaongorora iyo PST faira rekuti uone fomati yayo otomatiki Nekudaro, izvi zvinotora nguva yekuwedzera uye hazvina basa.
By default, DataNumen Outlook Repair ichachengetedza iyo data yakashandurwa kuita nyowani PST faira inonzi xxxx_fixed.pst, uko xxxx ndiro zita reiyo faira rePST faira. Semuenzaniso, kune sosi PST faira Outlook.pst, iyo default yakashandurwa faira ichave Outlook_fixed.pst. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Unogona kuisa zita rakashandurwa refaira zvakananga kana tinya iro bhatani rekutarisa uye sarudza rakashandurwa zita refaira.
Sezvo isu tichida kushandura iyo Unicode PST faira kuita ANSI fomati, isu tinofanirwa kusarudza fomati yeiyo yakashandurwa PST faira ku "Outlook 97-2002" mubhokisi re combo padivi peiyo yakashandurwa faira edit bhokisi. Kana iwe ukaisa fomati ku "Outlook 2003-2010" kana "Auto Kutsunga", saka DataNumen Outlook Repair inogona kukundikana kugadzirisa uye kushandura yako Unicode PST faira.
Baya bhatani, uye DataNumen Outlook Repair kuda start kuongorora uye kushandura iyo sosi Unicode PST faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekuita, kana iyo faira Unicode PST faira ikashandurwa ikaita nyowani ANSI PST faira zvakabudirira, iwe uchaona meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino iyo nyowani yakashandurwa PST faira iri mune ANSI fomati, iyo inogona kuvhurwa neMicrosoft Outlook 97-2002.
Cherechedza: Iyo demo vhezheni icharatidza inotevera meseji bhokisi kuratidza kubudirira kweshanduko:
Mune iyo nyowani yakashandurwa PST faira, zviri mukati memessage uye zvakabatanidzwa zvinotsiviwa neruzivo rweedemo. Ndapota Raira iro rakazara vhezheni kutora izvo chaizvo zvakashandurwa zvirimo.